China yadi chikwangwani Mugadziri uye Anotengesa | Kumhanya
Corrugated plastiki ndiyo yakasarudzika yemazuva ano yekudhinda indasitiri. PP Corrugated pepa zvakare inonzi correx, corflute, coroplast, fluteboardt.Corrugated pepa rakanakira zvemukati nekunze manyorerwo. Yakasimba pane yakashatiswa fiberboard, yakareruka pane yakawedzera mapepa epurasitiki, uye haina mvura uye banga.
Kunyanya kudhinda zvigadzirwa
Isu tinopa kudhinda kwepepa rekudhinda, senge pasi pekuchengetedza pepa kudhinda.bhokisi kudhinda, kunge okra bhokisi kudhinda, asparagus bhokisi kudhinda, zvinotapira chibage, celery bhokisi kudhinda. kudhinda zviratidzo, kunge zviratidzo zvevhoti, zviratidzo zvekunyevera, zviratidzo zvekutengesa uye zvichingodaro.
Masheti akaora, 2mm kusvika 12mm, anobatwa zvakapetwa kaviri ne "Corona Discharge" pamativi ese maviri kuti abvumire yakanyatsogadzirwa inks uye adhesive kuomerera.
Akajairika masaini ekudhinda saizi sekutevera
Ichena, Yakasikwa, Chiedza Bhuruu, Yepakati Bhuruu, Yakasviba Bhuruu, Bvuu, Bhurawu, Yero uye nezvimwewo
Kutakura shandisa PE firimu, yehukuru hukuru, 20pcs pane bhuruga, nekuda kudiki diki, 50pcs pane bundle.Pallet inowanikawo.Kana uine chero chinodiwa, ndokumbirawo utaure.
Yepfuura: chiratidzo chekunyevera
Inotevera: asparagus bhokisi